GNOME Denderedzwa Yakaunzwa Kugonesa Kubudirira kweGNOME | Linux Vakapindwa muropa
Pakati pevhiki rapfuura pakanga paine nhau dzakanangana nechirongwa cheGNOME, kunyanya chakakosha chimwe chavasina kuzivisa nehukuru hwevanhu, senge GNOME 3.38.2 kuburitswa. Nguva pfupi yapfuura, chirongwa chimwe chete ichocho Yakazivisa chimwe chinhu, asi izvi zvinoita kunge zvakakosha: ivo vakachidaidza GNOME Denderedzwa, uye pano tichaedza kutsanangura zvishoma pamusoro apa kuti chii uye nezvavanotarisira kuzadzisa neiyi danho.
GNOME Circle yaive chimwe chinhu chavakataura pane yekupedzisira Linux App Summit 2020, asi ikozvino mharidzo yacho iri pamutemo. Pakutanga, yakagadzirirwa kuti gonesa matsva ekushandisa uye maraibhurari kuve chikamu cheiyo purojekiti GNOME, iyo yaizoita inozivikanwa graphical nharaunda, inoshandiswa nekutadza mune makuru mavhezheni ekugovera seFedora kana Ubuntu, kugadzirisa mukuenderana.
GNOME Circle ichavandudza kuenderana, pakati pevamwe
Pamusoro pechirevo, chirongwa chakavhura peji yeichi chirongwa, icho chatinokwanisa kuwana kubva Iyi link. Uye chinhu chekutanga chatinoverenga ndechekuti: «Zvishandiso uye maraibhurari ayo anowedzera iyo GNOME ecosystem«. Yakatsanangurwa neimwe nzira uye naivo pachavo:
Munguva yakapfuura, kuve chikamu cheiyo GNOME chirongwa, zvirongwa zvebudiriro zvaifanirwa kuitirwa pazvivakwa zveGNOME nekutevera iyo GNOME yekuvandudza mitemo. Izvi zvakagadzira chipingamupinyi chekupinda kune vazhinji vanogadzira avo vaive vakanangana nemaprojekiti avo vega. GNOME Circle inovavarira kushandura izvo nekudzora zvipingaidzo uye kuvaka hukama nevasimudziri vari kuita zvinhu zvikuru neGNOME chikuva. Kuti uve nhengo, mapurojekiti anofanira kungova akavhurwa sosi software uye shandisa iyo GNOME chikuva. Ose maapplication uye ekuvandudza maraibhurari anogona kuiswa. Mapurojekiti haadi kuitirwa pazvivakwa zveGNOME, uye ivo havafanirwe kuteedzera iyo GNOME kuburitsa chirongwa.
Pasina mubvunzo, izvi zvichashandura mune ramangwana riri nani revashandisi veGNOME, asi… ndiri kunamatira ne KDE.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » GNOME Circle yakavhurwa zviri pamutemo kubvumidza mamwe maapplication uye maraibhurari kujoina GNOME
Zvakanaka, zvinonakidza kwazvo, asi ... zvakadaro, ndichaenderera mberi neKde, kudzamara varega kushandisa js.
Munhu angave asina mhosva here kuti asaone hutamba hwevanhu?
Ivo vanoramba vachipfekedza korona yega yega app neanomanikidzwa kutsamira pane dbus uye systemd
saka hapana chinogona kumhanyisa desktop yako crap.
Zviratidzo zvinowira muchinzvimbo chevanyengeri vanobhururuka vachademba munguva pfupi iri kutevera
sezvo ivo vachigona chete kuurayiwa kana iwe wakanyatso gadza rese gnome.
Maonero angu ndeekuti vanonyatsotitora semapenzi kana mapenzi uye kuti hatina kuona zvirongwa zvavo.
Usatombo kunetseka isu hatizozvifunga, kunyangwe kana iwe uri kukanganisa uye gnome ndiyo yakanyanya kunaka pasirese.
Kuchinja kwakanaka kwemaonero